ခင်ရတီသင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ….. – Shwe Naung
ခင်ရတီသင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ…..
N N | April 5, 2021 | Celebrity | No Comments
ဖွေးဥနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြီး ရင်ဖိုဖွယ်ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ TIK TOK လေးများ
လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိ နေတဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေး တွေနဲ့ social
media လောက မှာ ခေတ်စား နေ ပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် ကို တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ ခင်ရတီသင်း ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး တွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိပြီး ချစ်စရော ကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို
ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနို င်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယော ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ယခု အခါမှာ လည်း မြန်မာ ဝတ်စုံ ခါးတိုလေး တွေနဲ့ အရမ်းလှ တဲ့ ပုံတွေ ကို တင်ပေးလာ တာပဲဖြစ် ပါ တယ်။
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ရော မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ အခိုင် အမာ ရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို ပရိသတ် တွေရဲ့ ရှေ့ ကို ချပြ လေ့ရှိပါ တယ်။
သူမ ကတော့ ယခု မှာ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေ တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွား စေခဲ့ ပါတယ်။
သူမ ရဲ့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်း လွန်းနေ ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေဟာ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ် တွေ ပိုစေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် ရဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံ လေးနဲ့ လှပ နေတဲ့ ခင်ရတီသင်း ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ တွေနဲ့ ကြုံကြုံနေရတဲ့ အခုအချိန်မှာ အင်းစိန်ထောင်ထဲ ကကြားရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ပိုင်တံခွန် အတွက် စိတ်ပူပန်နေ ကြောင်းပြောပြ လာတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း….
ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပ နေတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပရိသတ် တွေရှေ့ ချပြလာ ခဲ့တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း….
ပြည်သူ တွေ နဲ့ အမေရိကန် သံရုံးရှေ့မှာ အတူ ထိထိ ရောက် ရောက် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ တဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ…
တတ်အား သရွေ့ ကူညီအား ဖြည့်နေ ကြတဲ့ ဖြိုးလေး နဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး….
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မော်ဒယ်လ် မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ ‌မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
အလန်းစား ဖက်ရှင်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးပီး လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
သရုပ်ဆောင် ထားထက်ထက် ကတော့ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာတွင် ရောက်ရှိနေ……….